Ukusetshenziswa kwegama elingukhiye lokusesha
Izinjini zokusesha zithola amagama asemqoka ezingxenyeni ezahlukahlukene zekhasi bese uzisebenzisa ukuthola ukuthi ngabe ikhasi kufanele libekwe emiphumeleni ethile noma cha. Ukusetshenziswa okufanele kwamagama angukhiye kuzokwenza ikhasi lakho likhonjelwe ukuseshwa okuthile kepha akusho isiqinisekiso sokubekwa noma isikhundla ngaphakathi kwalolo cwaningo. Kukhona nezinye amaphutha ajwayelekile wegama elingukhiye ukugwema.
Ikhasi ngalinye kufanele likhombe iqoqo eliqinile lamagama angukhiye. Ngokubona kwami, akufanele ube nekhasi elibhekise ngaphezu kwe-3 kuye ku-5 futhi lezo kufanele zihlobane. Ngakho-ke 'uhla lwamakheli' kanye 'nohlu lokumaketha oluqondile' kuhlobene ngokuqondana kwesinye nesinye futhi kungasetshenziswa ekuxhumaniseni omunye nomunye ekhasini.
Ikhasi lakho kufanele ligxile kokuqukethwe okuhle okuqhuba ukuguqulwa, hhayi ukugxila kukho ukufaka amagama angukhiye kukho konke okuqukethwe. Ukusetshenziswa kwemvelo kwamagama asemqoka kubaluleke kakhulu - ukuze izinjini zokusesha zibone amagama angukhiye kepha izivakashi aziziboni ngempela. Okuqukethwe kushayela ukuguqulwa (ukuthengisa) - ngakho bhala kahle!
Lapho Ongacwaninga Amagama Asemqoka
Amathuluzi kuphela engiwasebenzisela wona ucwaningo lwegama elingukhiye kukhona Semrush futhi BuzzSumo. IBuzzSumo inikeza ukuqonda ngokuthandwa kokuqukethwe futhi Semrush inikeza ukuqonda ngezinga lokuqukethwe… lokhu kokubili akufani ngaso sonke isikhathi. Ngaphandle kwenqwaba yamathuluzi wokucwaninga amabhuku, Semrush wenza nje umsebenzi omangalisayo wokuhlonza amagama abaluleke kakhulu ebhizinisini lakho. Nazi izindlela ezimbalwa engisebenzisa ngazo ithuluzi:
Amagama angukhiye wesizinda - Ngigijimisa imibiko kwiklayenti ukuthola amagama angukhiye okungenzeka asevele esezingeni lawo futhi nginqume ukuthi ngabe kukhona amasu afana nokushintsha kokuqukethwe nokuphromotha engingakusebenzisa okuzothuthukisa izinga labo.
Amagama angukhiye ahlobene - Uma ngithola amagama angukhiye engifisa ukuwakhomba, ngisebenzisa imibiko yamagama asemqoka ahlobene ukukhomba enye inhlanganisela yamagama asemqoka engingase ngikwazi ukuwaqoqa kangcono.
Ukuhlaziywa kwe-Gap - Semrush inesici esihle impela lapho ungaqhathanisa izizinda eziningi futhi ukhombe lapho uncintisana khona nezinye izizinda. Sivame ukukhomba amagama aphambili esincintisana nawo amaklayenti ethu abekwe ezingeni esingawalandelanga.
Ungawasebenzisa Kanjani amagama asemqoka ngempumelelo kusayithi lakho le-SEO
Domain - uma igama lakho lesizinda linamagama asemqoka, kuhle. Uma kungenjalo, kunjalo futhi. Qiniseka ukuthi ubhalise isizinda iminyaka eyi-10 ukuze i-Google ibone ukuthi akusona isiza sogaxekile futhi iyasebenza. Ubude bokubhaliswa kwesizinda yinganekwane ye-SEO. Kodwa-ke, isizinda esisha sizoba negunya elincane kunaleso ebesingasetshenziswa esikhathini esedlule ngamagama afanayo. Ngaphambi kokuthi ubheke isizinda esisha, hlola ezinye izindali kwezinye izizinda ezifanele… ungaqala kahle uma usaqala!
Isihloko Sekhasi Lasekhaya - qiniseka ukuthi ithegi yakho yekhasi eliyisiqalo inemigomo embalwa oyilandele bese uyibeka ngaphambi kwegama lenkampani yakho.
Isihloko Somaki - ikhasi ngalinye elizimele kufanele libe namagama asemqoka okuqukethwe yilelo khasi.
Amathegi eMeta - umaki wegama elingukhiye uzitshwa yizinjini zokusesha namagama asemqoka asetshenziswe encazelweni yekhasi lakho akunakwa. Kodwa-ke, lapho othile efuna igama elingukhiye elithile, kufakwa isibindi ekhasini lemiphumela yenjini yokusesha ukuze umsebenzisi wokusesha abe sethubeni lokuchofoza emphumeleni wakho.
I-Heading Tags - ku-HTML, kunezihloko nezihlokwana. Lokhu ikakhulukazi , , tags ngokulandelana kokubaluleka. Izinjini zokusesha ziwanaka lawa ma-tag futhi kubalulekile ukuthi uwanake futhi udale amakhasi futhi usebenzise amagama angukhiye. Ngokuthunyelwe kubhulogi, sebenzisa amagama angukhiye ezihlokweni zakho zebhulogi. Gwema ukusebenzisa , , noma amathegi kubha yakho eseceleni.
Okugqamile Nomalukeke - qinisa noma ubhale amagama akho asemqoka ekhasini ukuze zigqame.
Image Alt nencazelo - uma usebenzisa isithombe (kunconyiwe) ngaphakathi kwamakhasi wakho wesayithi noma okuthunyelwe, qiniseka ukuthi usebenzisa amagama asemqoka ngempumelelo kuma-alt wesithombe noma kumathegi encazelo.
Uhlelo lwakho lokuphathwa kokuqukethwe kufanele likuvumele lokhu.
Izixhumanisi Zangaphakathi - uma usho okunye okuthunyelwe noma amakhasi ngaphakathi kwesiza sakho, qiniseka ukusebenzisa igama elingukhiye ngempumelelo embhalweni wehange wesixhumanisi salokho okuqukethwe nakumaki wesihloko wethegi lesikhonkwane.
Gwema ukusebenzisa amagama ajwayelekile afana nokuthi 'funda kabanzi' noma 'chofoza lapha'.
Amagama okuQala Okuqukethwe - amagama okuqala ekhasini lakho noma okuthunyelwe kufanele afake amagama asemqoka ahlobene nokuqukethwe ngaphakathi kwalelo khasi.
Okuphezulu kwekhasi - Izinjini zokusesha zibheka ikhasi bese zihlaziya okuqukethwe kusuka phezulu kuye phansi, phezulu kwekhasi okuqukethwe okubaluleke kakhulu futhi ngezansi kwekhasi akubalulekanga kangako. Uma unesakhiwo sekholomu, hlola nenkampani yakho edizayine ingqikithi yakho bese uqinisekisa ukuthi amakholomu aphansi ku-HTML yakho kunomzimba wokuqukethwe kwakho (izingqikithi eziningi zibeka ibha eseceleni kuqala!).
Ukusetshenziswa Okuphindaphindiwe - kokuqukethwe kwakho (okwaziwa nangokuthi i- ukuminyana kwegama elingukhiye), kubalulekile ukusebenzisa amagama angukhiye ngokwemvelo kokuqukethwe kwakho. Izinjini zokusesha ziya ngokuthuthuka kakhulu ekutholeni imigomo efanelekile, ngakho-ke nawe Akudingeki ukuthi uphinde ibinzana elifanayo ngqo. Hlala usebenza ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kungokwemvelo futhi kuyaphoqa. Ngenkathi okuqukethwe okulungiselelwe ngokweqile kungakuthola, ngeke kukuthengise!
Nayi enye inothi… amagama angukhiye akudingeki afane. Amagama we-Co-occurrence kanye nama-synonyms abaluleke kakhulu futhi empeleni angakuthola okuqukethwe kwakho kutholwe inhlanganisela enkulu yokusesha uma uyisebenzisa. Esibonelweni salokhu okuthunyelwe, ngisebenzisa amagama afana nalawa Ukusetshenziswa kwegama elingukhiye, kepha ngisebenzisa amagama afana nalawa SEO, ukuminyana kwegama elingukhiye, sokuqukethwe, isihloko tags… Yonke imigomo efanele isihloko kodwa engenza lokhu okuthunyelwe kutholakalele ukuhlanganiswa okuningi.
Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi abasebenzisi bezinjini zokucinga bathayipha inhlanganisela ende yamagama asemqoka - kufaka phakathi imibuzo neminye imishwana ukunciphisa imiphumela. Ngakho-ke igama elingukhiye aligcini kwinhlanganisela yegama eli-1 noma lesi-2, kungahle kube umusho wonke! Futhi sithole ukuthi uma inhlanganisela inde, umentshisi uba ngcono, itrafikhi iyafaneleka - futhi lapho isivakashi sizoguquka khona.
Uma ungathola izixhumanisi zangaphandle ngamagama asemqoka abuyele kusayithi lakho, kungcono nakakhulu! Lokhu okuthunyelwe kwakumayelana nokusetshenziswa kwamagama asemqoka esizeni, noma kunjalo.
Amagama angukhiye abamba ukubaluleka okwedlulele kwebhizinisi elinamawebhusayithi angukunwetshwa okubalulekile kokusebenza kwawo. Uma isetshenziswe kahle, amawebhusayithi alungiselelwe ngegama elingukhiye angaholela emiphumeleni yokusesha engcono futhi andise ithrafikhi eya esitolo esiku-inthanethi. Ekugcineni, kusiza nebhizinisi ukuheha amathuba anethuba eliphakeme lokuguqula libe amakhasimende akhokhelayo. Umakhi Wezebhizinisi Ophilile
Nayi i-infographic evela ku-Healthy Business Builder, Kungani Amagama Angukhiye Ebaluleke Kakhulu Ekuthengisweni Kwakho Kwe-inthanethi:
Ukudalula: Ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuxhumana se- Semrush esihlokweni.
Tags: omunye umbhaloboldamagama angukhiye wesizindaokugcizelelayoukuhlaziywa kwegebeomaki besihlokoikhasi lesikhwama sasekhayaisithombe altitalicukuncintisana kwamagama asemqokaucwaningo lwegama elingukhiyeUkusetshenziswa kwegama elingukhiyeAmagama angukhiyeamagama angukhiye we-metaukuthuthukisasemrushseoStrongisihloko tags
Nov 9, 2009 ngo-10: 18 PM
Lokhu okuqukethwe okuhle uDouglas. Amasayithi amaningi, okuguquguqukayo okuningi, nezinguqulo eziningi laphaya okuya kudida kunoma ngubani oqala ukufunda ngenkundla ye-SEO. Kepha uvele waqonda ngqo kokubalulekile nokungafanele; lokho abanye abakubiza ngokuthi "kuze kube seqophelweni"! Impela kufanele ngibe nesabelo nabantu engibabona. –UPawulu
Nov 10, 2009 ngo-2: 46 AM
Ukuthola okumangalisayo, i-PJ! Ngangizwile 'ukuduma' ngakho-ke nginqume ukukufaka kokuthunyelwe. Ngicabanga ukuthi ayilimazi lutho (ngaphandle kwesikhwama sakho semali)! Siyabonga ngokuthatha isikhathi futhi uthumele lokhu!
Nov 11, 2009 ngo-2: 29 AM
Ngabe # 1 iyiqiniso ngempela? Ngizwile imibono exubile ngayo. Nginazo zonke izizinda zami ekuvuselelweni konyaka ongu-1. Ngabe ngiyazisonga ngempela emikhakheni yami yebhizinisi ngokungawanwebisi aye eminyakeni eyi-10?
Nov 11, 2009 ngo-2: 55 AM
I-PJ yenze ukuhlaziywa okuhle futhi ithole ezinye izindatshana ngqo ezivela kuGoogle eziphikisana nalokhu. Ngakho-ke - ngicabanga ukuthi angizikhathazi kakhulu ngakho. Ngiyakwenza namanje, yize… ngicabanga ukuthi kuwumkhuba omuhle futhi ngiyakuzonda ukuthi ngaso sonke isikhathi zibonakala ziphela lapho ngingenamali!
May 9, 2013 ku-5: 18 PM
Ngiyabonga ngale ndatshana. Ngisho nalokhu kwabhalwa eminyakeni engu-3.5 eyedlule kusengolwazi olufanele nolusizo kakhulu.
May 9, 2013 ku-8: 22 PM
Kusasebenza, kepha mhlawumbe ngingahle ngigxile ekuphindaphindeni nasekugxileni kakhulu ekwenzeni okuqukethwe okuhle. I-Google izothola lapho kufanele ibe khona!
Aug 29, 2013 ku-7: 32 AM
Aug 20, 2015 ku-5: 29 AM
I-Awesome Article, ngiyazibuza ukuthi izinto ziyefana nanamuhla njengoba zazinjalo ngaphambi kweminyaka engu-3-4.
Aug 20, 2015 ku-10: 15 AM
Ngokwengxenye enkulu, ngikholwa ukuthi kusabalulekile. Kodwa-ke, ngingakhuthaza ukubhalela umfundi wakho futhi HHAYI ukunaka kangako imishini yokusebenza kwegama elingukhiye le-SEO. Ngenkathi lawa masu engakusiza ukuthi ubhaliswe kahle, ukulinganiswa kuzoya ngokuthandwa kwalokhu okuqukethwe. Ukusebenzela ukuqinisekisa ukuthi unokuqukethwe okuhle, okunothile kubaluleke kakhulu kunokufakwa kwamagama asemqoka ngo-2015. Futhi, i-Google ibona imigomo yokuhlangana namuhla ingcono kakhulu kunangaphambili.
Jul 19, 2017 ku-8: 04 AM
Amagama angukhiye adlala indima ebalulekile ku-SEO. Abantu abaningi bayahluleka ukuzibeka kahle ezinjinini zokusesha, ngenxa yocwaningo olungafanele lwegama elingukhiye nokubekwa. Kodwa-ke, ngenxa yokuthunyelwe kwakho, nabaqalayo manje sebengakwazi ubuciko bokusetshenziswa kwegama elingukhiye. Indatshana enhle. Kuyasiza ngempela. Ngiyabonga kakhulu ngokwabelana!